Wararka - Maxaad u Dooratay Mareykanka
Waxaan ballan qaadaynaa, heerka u qalma ee alaabtu tahay 100%, iyo muddada damaanad qaadku waa 3 sano. U hoggaansama heshiiska oo si xamaasad leh u fuliya shuruudaha heshiiska: keenista waqtiga, ogeysiiska waqtiga ku habboon ee alaabada loo keenayo dhinaca kale; miyir-qabka adeegga, had iyo jeer dul istaag dhererka amarka ee baahida isticmaale, samee wadatashi dhammaan adeegyada cimilada; Shaqaalaha shirkadeena si ay ugu qancaan macaamiisha sida shuruudaha, macaamilku had iyo jeer waa sax, adeegga ayaa kaliya ka fiican, ma jiro wax ugu fiican, adeeg dib uma noqon karto; Samee shaqo wanaagsan oo ah soo noqoshada macaamiisha waqtigeeda, weydiiso fikradaha macaamiisha, hagaajinta macluumaadka badeecada, iyo inaad si firfircoon uga jawaabto una soo jeediso xalalka dhibaatooyinka kala duwan ee ay soo bandhigeen macaamiisha, si markaa loo saxo dhibaatooyinka waqtiga ku habboon illaa macaamiisha ay ku qanacsan yihiin.
Qalabaynta nidaamka tijaabada:
Dhammaan tijaabooyinka daalku waa kuwo si otomaatig ah u shaqeynaya, taas oo aan kaliya hagaajinaynin waxtarka shaqada, laakiin sidoo kale hubisa shaqaalaha.
Wada-hawlgalayaasha caalamiga ah:
Shirkadaha ugu caansan badankood waxay jecelyihiin shabakadda
Fikradda Shirkadeed ee Shirkadda:
Raadi suuqa oo ku saleysan tayo, raadso horumar daacadnimo leh; korsado adduunyo cusub & tikniyoolajiyad sare, sameyso iskaashi dhexmara shirkadaha, abuuro cinwaanka hogaaminaya; fulinta istiraatiijiyadda balaayiinnada hantida, si aad caan u noqotid uguna horreyso. marka la eego xaaladda suuqa. Shirkadda, ku guuleysiga kalsoonida kooxda shaqaalaha u go'ay si hufan, sirdoon iyo hufnaan, waxay horumarineysaa adeeg tayo sare leh & adeeg sare leh & shirkad heer sare ah.
Iyada oo ku saleysan tayo aad u fiican, naqshad khibrad leh & karti wax soo saar, faa'iidada qiimaha tartanka, Waxaan alaab ka iibinnay Aasiya, Yurub, Ameerika, Bariga Dhexe iyo Afrika, ECT, in ka badan 60 dal iyo aagag.
Haddii aad xiiseyneyso alaabtayada, fadlan nala soo xiriir sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah !!!
Lambarka boostada: 050200